Time flies by so fast. I try not to think of my birthday in
[VIDEO] Panas! Pendedahan Dana Rakyat RM2.7 Billion Untuk Isi Kantong Umno Selangor
Syria: Why al-Qaeda Is Winning By Ed Husain
Who are the Alawites of Syria?
More Holy Humour
Gambar Berbicara: Siapa Yang Empunya Lidah Bercabang Ini?
John Romaniello And Matt McGorry’s
Posted: 23 Aug 2012 10:16 AM PDT
Posted: 23 Aug 2012 08:59 AM PDT
VietJetAir held bikini show on board from YeinJee's Asian Journal
Posted: 20 Aug 2012 08:20 AM PDT
Miss China Yu Wenxia was crowned the 2012 Miss World in Ordos, China, on August 18. The 23-year-old music student became the second Miss World winner from her country after Zhang Zilin in 2007. The first runner-up is Sophie Elizabeth Moulds of Wales and the second runner-up is Australia's Jessica Michelle Kahawaty…
As usual there's plenty post-event debates online afteramajor beauty contest, but this one drawn more flak in particular, probably due to the fact that the event – the oldest surviving major international beauty pageant – has becameabit too "Chinese" in the past decade with six of the past 10 finals being held in Chinese cities.
Miss China crowned Miss World 2012 from YeinJee's Asian Journal
The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) is internationally recognised for its reputation in fighting graft in Malaysia. Its bosses too are highly-ranked for their credibility in leading the much-afraid commission.
I have developedagood contact and rapport with some of its senior officials, especially after my blog post in February 2011 exposedascandal at the MCMC.
Apart from that, the relation goes too mutual.
However, 17 months after giving my statements and proof to the MCMC and MACC, the case seems to lead to nowhere althoughasuperintendent with the MACC confirmed that the commission had tangible evidence to fileacase against the 'special officer' to the minister.
Even few officers at the MCMC confirmed that the special officer - who months later was conferredadatukship (for making quick bucks out of the laptop contract?) - gotagood hand from the top people ataministry and the commission.
I was delighted with the outcome of the initial investigation.
The MACC superintendent did his job quite well in collecting evidence and related documents which would implicate the guy in court.
Then, towards the year end, there wasalull.
When I called up the superintendentafew times, he said he was in Sabah, all the time in Sabah. And each time I asked about the case, he refused to feed me with details. Instead, he gave me the name of another officer whom I should liaise with in Putrajaya.
But that officer too refused comments. The only thing he said was 'dont worry, we have enough proof and we will prosecute him soon'.
After that, nothing happened. In fact, the officer refused to see me while the superintendent said he was still in Sabah. Was he transferred to Sabah for his investigative role in the case? He has also deleted my name and phone number from his list because when I SMSed him last nite, he replied 'I am in Sabah, and who is this?'
Nope! I don't blame him but I am taking the MACC to task for neglecting the case. I believe some big guns have applied pressure on the MACC to put the case to 'rest'.
Or was thereacover-up?
So, how am I suppose to trust the integrity of the MACC if the top people cannot touch politicians and the 'big fish'? O-oh, maybe they are too busy nabbing the small fish for the sake of fulfilling their responsibility in fighting corruption!
Until the MACC explains what actually happened to the case, I will continue my pursuit for an answer...a logic one, of course!
Posted: 23 Aug 2012 10:29 AM PDT
Posted: 08 Aug 2012 07:14 AM PDT
That AUDI… probably the most blatant product placement I've seen inaJpop or Kpop music video. My dream car btw, which costs twice as much as the house I'm living in (still on mortgage). Yeah, it's probably justadream.
4Minute – Love Tension music video from YeinJee's Asian Journal
Posted: 23 Aug 2012 06:46 AM PDT
၅.၅.၁၂က သတင်းစာမှာ ပါသည့် အသုံးအနှုန်း "မွတ်စလင်မ်ကုလား"ဆိုသည်က ဒီရက် ပြသနာမျိုးစုံ ကြားသိနေချိန်ကျမှ ပိုပြီးစော်ကားခံလိုက်ရသလို၊ မီးလောင်နေစဉ် ဓာတ်ဆီဖြန်းခံလိုက်ရသလိုခံစားရပါသည်။
ဒီကိစ္စအတွက် facebook စာမျက်နှာတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲထွဋ်က ထိုအသုံးအနှုန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တောင်းပန်သည့် ပုံစံမျိုး နောက်ရက်တွင် ပြင်ဆင်ချက် ထည့်ပေးမည့် ပုံစံမျိုး တွေ့ရပြန်တော့ အားလည်း တက်မိသလို မျှော်လင့်တစ်ကြီးလည်း စောင့်ကြည့်မိသည်။ ဘယ်တုန်းကမှ သာမန်အားဖြင့် ကြည့်လေ့မရှိသည့် ည၈နာရီ ရုပ်သံသတင်းကိုပင် မျက်တောင်မခတ်တမ်း ထိုင်ကြည့်ဖြစ်သည်အထိ။
ဒီနေ့ ပြင်ဆင်ချက်ကတော့ ပါလာသည်။ "မွတ်စလင်မ်ကုလား" အစား "ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ် ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ" တဲ့။
မည်သို့ အဓိပ္ပါယ် ဖော်ဆောင် သတ်မှတ်ရမည်မသိ။ မြန်မာနိုင်ငံသား ဟုပင် လက်မခံတဲ့သဘောဖြစ်နေပါပြီ၊၊ ကမ္ဘာမှာ မရှိဘူးသေးတဲ့ သတင်းရေးသားမှုတွေ၊၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ပြင်ပေးသည့်အတွက်တော့ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အပြင်လူတွေကတော့ ဒီလူတွေ နေရာတစ်ကာ စပ်စပ်ထိမခံ ဖြစ်နေကြသည်ဟုသာ မြင်ကြဖို့ များသည်။ ဘယ်လိုခေါ်ခေါ်ပေါ့ ဒါဒါပဲ ဥစ္စာဟု ရိုးရိုးသားသား ဆိုသူကလည်းဆိုကြသည်။ ကုလားကို ကုလားမခေါ်လို့ ငါတို့က ဘယ်လိုများ သမုတ်ရပါ့ ဆိုသူတွေလည်း ဒုနှင့်ဒေး။ ပိုးစိုးပက်စက် ဆဲဆိုတုန့်ပြန် လှောင်ပြောင်သူတွေကလည်း တစ်ပုံတစ်ပင်။ ခက်သည်က မွတ်စလင်မ်ကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေသူ အများစုက မွတ်စလင်မ်နှင့်ပတ်သက်သည့် သမိုင်းဆိုလျင် အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်စရာလောက်၊ ရိုဟင်ဂျာအရေး ပိုးစိုးပက်စက် ဝေဖန် ရေးသားထားသည့် တစ်ဖက်သတ်စာများ ဝါဒဖြန့်တရားများကိုလောက်သာ ဖတ်ဖူးကြားဖူးထားကြသူများ၊ မြန်မာ့သမိုင်းဆိုလျင်လည်း ဗုဒ္ဓဟူသည် ဗမာလူမျိုးဟူသည့် စာအုပ်မျိုးဖတ်ဖူးပြီး ဂေါတမ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုသည်ပင်လျင် အညာဒေသက ဗမာကြီးထင်နေကြသူများ၊ ဗာရာဏသီကို မုံရွာဘက်က ယူဆထားသူများ၊ ချစ်တီးမှန်း၊ ဟိန္ဒူမှန်း၊ မွတ်စလင်မ်မှန်းပင်လျင် ဘာကွာလို့ကွာမှန်းမသိလောက်အောင် ပြင်ပဗဟုသုတကြွယ်ဝကြသူများ၊ ကျားကျားမီးယပ် မွတ်စလင်မ်ဆို မုန်းတယ်ကွာဟူသည့် မျက်ကန်း ဝံသာနုရက္ခိတတရားရှင်များ ဖြစ်နေလေသည်။
လက်ရှိအနေအထားက မြန်မာပြည်တွင်းရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လူ့အစုအဝေးကြီး တစ်ရပ်လုံးသည်ပင်လျင် မနေ့တစ်နေ့ကမှ သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်ကမှ သို့တည်းမဟုတ်တောင် အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ တရားမဝင် ခိုးဝင်လာကြသည့် အလား။ တိုင်းပြည်အတွက် အဖျက်သက်သက်လုပ်နေကြသည့် နိုင်ငံခြားသားများအလား။ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်ပြန်ကြပေါ့၊ သူများမြေမှာလာပြီး လူဝါးမဝနှင့် စသည်စသည်။
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စဖြင့် ပထမ စတင်ခဲ့သည်။ မြန်မာမွတ်စလင်မ်ဆိုလျင် ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းပြောတာ မနာကြဖို့၊ မင်းတို့ကို ပြောတာမဟုတ်၊ ဝင်နာနေကြရအောင် မင်းတို့ရဲ့ ဘာတွေလား၊ ညာတွေလား မေးခွန်းများ တရစပ်သုံးသည်။ နောက်တော့ တစ်မျိုးတိုးလာသည်။ စပြောတုန်းကတော့ နယ်စပ်ကရိုဟင်ဂျာအရေး သို့တည်းမဟုတ် ထိုသူများ ပြည်တွင်းသို့ ခိုးဝင်လာမည့်အရေးသက်သက်၊ ဘာသာရေးမပါဟု ဆိုကြရာမှ မြန်မာ့မြေမှာ အေးအတူပူအမျှ အတူနေသည့် မွတ်စလင်မ်များကိုရော ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ မွတ်စလင်မ်များကိုသာမက အစ္စလာမ်၏ အထွတ်အမြတ်ထားရာ ကိုးကွယ်ရာအရှင်၊ လူသားအလင်းပြပုဂ္ဂိုလ် တမန်တော်မြတ်… အခြားအခြားတို့ကိုပါ စော်ကားရေးသားလာကြသည်ကိုလည်း နေရာအနှံ့ တွေ့လာရသည့် အကြိမ်ရေ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပိုပို စိပ်လာသည်။ သမိုင်းလိမ် ဝါဒဖြန့် စာစဉ်များ၊ မုန်းတီးရေး လှုံ့ဆော်လွှာများ၊ အင်တာနက် (အထူးသဖြင့် facebook) စာမျက်နှာများ၊ ဂရုပ်များ အလျှိုအလျှို ပေါ်လာသည်။ ပြဿနာကို မီးမွှေးလာနေကြသည်။ ကြမ်းပိုးကို လိပ်မဖြစ်ဖြစ်အောင် ပုံကြီးချဲ့လာကြသည်။ မီးစကို ဓာတ်ဆီဖြန်းလာကြသည်။ အဓမ္မ လူထုအုံကြွ အကြမ်းဖက်မှုဖက်ကို ဖော်ဆောင်လမ်းကြောင်းလာကြသည်။ မည်သူမည်ဝါတွေက နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်နေသည်တော့ အသေအချာမသိရ၊ သေချာသည်ကတော့ သူတို့၏ မှိုင်းတိုက်မှု အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ရိုဟင်ဂျာကိုလိုလိုဘာလိုလိုနှင့် ပြည်တွင်းနေ မွတ်စလင်မ်များကိုပါ အကြောင်းမဲ့ အပြစ်မြင်လာကြသည်။ အမုန်းစိတ်ပိုပွားလာကြသည်။ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် လိုရာဆွဲ အသုံးချသူတို့ကြောင့် မလိုလားအပ်သော၊ မည်သူ့ကိုမျှ ကောင်းကျိုးမပြုသော၊ မဆိုင်သူများကိုပါ ဃယက်ထစေသော ပူဆွေးဝမ်းနည်း ကြောက်ရွံ့ ကြရစေသော လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ တရားဥပဒေမဲ့ ဖြစ်လာရသည်။
ဒီ ကုလားအခေါ်ခံရသည့်ကိစ္စက တကယ်တော့ မနေ့တစ်နေ့ကမှ ရုတ်တရက် ချက်ချင်း ဖြစ်လာသည် မဟုတ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘိုးဘွားများ လက်ထက်ကတည်းက အခြေအတင် ဆွေးနွေးကြပြီးသား၊ အခိုင်အမာ ပုံစံတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီးသား။ ထိုစဉ်ကာလကပင် နှစ်သက်မှုမရှိကြောင်း တိုင်းသိပြည်သိ အသိပေးခဲ့ကြပြီးသား။ ယခု ကျွန်တော်တို့ခေတ်တွင် ကြမ္မာရဟတ် တစ်ပတ်ပြန်လည်ရခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗမာလူမျိုးများအကြား ဗုဒ္ဓဘာသာ မပြန့်ပွား မထွန်းကားသေးမီ ပုဂံခေတ် အစောပိုင်း (အနော်ရထာမတိုင်မီ) ပိသုံမင်းလက်ထက်ကတည်းက အစ္စလာမ်ဘာသာ ရောက်ရှိကြောင်း အထောက်အထားများ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ ရှိသည်။ ပုဂံခေတ် ကျောက်စာများထဲတွင် ပသီ၊ ပန်းသေး စသည့် အခေါ်အဝေါ်များ ပါရှိခဲ့သည်။
ကုလားဆိုသော အသုံးအနှုန်းကလည်း ရှေးယခင် ဘုရင်မင်းများလက်ထက်ကတည်းက ခေါ်ဝေါ်လာသည့် အသုံးအနှုန်း။ မနေ့တစ်နေ့ကမှမဟုတ် မြန်မာ့သမိုင်းအစကတည်းက ကုလားဆိုသူများနှင့် ကူးလူးဆက်နွယ်မှု ရှိုခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် မွတ်စလင်များကိုရည်ညွှန်းပါက ပသီကုလားဟုခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ ဘိုးတော် ဗဒုံမင်းလက်ထက်က ဘုရင့်အမိန့်ပြန်စာမှတ်တမ်းတွင် (လက်ရှိ အမရပူရရပ်၊ လင်းဇင်းကုန်းသုသာန်တွင် မျြုပ်နှံထားသော) အာဗစ်ရှားဟုဆိုင်နီအား မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်ရှိ ပသီကုလားတို့အတွက် သာသနာပ်ိုင်အဖြစ်ခန့်အပ်ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့သည်။ မင်းတုန်းမင်းလက် စာတော်ကြီးတွင်လည်း
ကုလားရွာမ၊ ကုလားဗလီဆရာ၊ ကုလားလူမျိုး စသည်ဖြင့် သုံနှုန်းခဲ့သည်။ ပသီကုလားများသည် ရှေးမြန်မာသမိုင်းတစ်လျှောက် တာဝန်ကျေခဲ့သည်။ ဘုရင်ကိုသတ်လျင် ဘုရင်လုပ်နိုင်သည့် ခေတ်အခြေအနေတွင် ဘုရင့် ကိုယ်ရံတော်၊ လူယုံတော်၊ အထောက်တော်၊ အဝယ်တော်၊ စစ်သည်တော်အဖြစ် ခစားခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း မြင်းမှာအုန်းခွံ ကျွန်မှာကုလား၊ ဓားမှာမိုးကြိုးဟုပင် အဆိုတွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်ကလည်း ဘုရင်မင်းမြတ်တို့က မိမိတို့အပေါ် အထူး သစ္စာစောင့်သိကြသော ပသီကုလားတို့အား အတုန့်အလှည့်အနေဖြင့် ဝတ်ကျောင်းတော်များ သာသနိကအဆောက်အအုံများ ပြည်တွင်၌သာမက တိုင်းတစ်ပါးရပ်ခြား ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံထိပင် ကြည်ဖြူစွာ ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့သည်။
ထိုစဉ်ကသုံးနှုန်းခဲ့သည့် ကုလားဆိုသော အခေါ်အဝေါ်သည် ကုလပုတ္တရ-မြတ်သောအနွယ်ဟူသော စကားမှဆင်းသက်လာသည်ဟု အဓိပ္ပွယ် ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ဂေါတမ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကလည်း ကုလားလူမျိုးသာဖြစ်သည်။ အချို့ကလည်း သင်္ဘောများဖြင့် ကူးလာသူများဟုဆိုရာမှ ကုလားဖြစ်လာကြောင်း ဆိုကြသည်။ ဤသို့ဆိုလျင်တော့ လက်ရှိ ဗမာဟု ဆိုကြသူတွေရော အခြား တိုင်းရင်းသားဆိုသူတွေပါ မူလဘူတ ဋ္ဌာနေ စစ်စစ်များမဟုတ် နှစ်ရာပေါင်းများစွာက တိဘက်၊ အန္ဒိယ၊ မွန်ဂို၊ တရုတ်တောင်ပိုင်းကနေ စတင်အခြေခံ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ရှာရင်း ကူးလာကြသူတွေချည်းသာ။ အားလုံး တနေနေရာက ကူးလာကြသူချင်းသာဖြစ်၍ ကုလားတွေချည်းသာ။ စောသည်နှင့် နောက်ကျသည်သာ ကွာသည်။ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရား မှန်သမျှသည်လည်း မြန်မာပြည်ဖြစ်စစ်စစ် တစ်ခုမျှမရှိ၊ အခြား နိုင်ငံများမှ ကူးယူထားသည်ချည်းသာ။
ရှေးဗမာမင်းများလက်ထက်က ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် ဗမာပြည်ရှိ ပသီကုလားခေါ် အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူမျာအကြား တစ်စုံတစ်ရာ ပြသနာကြီးကြီးမားမား မရှိခဲ့။ ကုလားဆိုသော အခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း ပသီကုလားအခေါ်ခံ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအနေနှင့် တစ်စုံတစ်ရာ နစ်နာရန် အကြောင်းပင် မရှိခဲ့။
သို့သော်…သို့သော်…။ နှစ်ကာလ အတန်ကြာသွားပြီးနောက်.. အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်သည့်ကာလတွင်ကား အရင်လို မဟုတ်တော့။ ထိုစဉ်ကာလအတွင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်အောက်ခံဖြစ်စဉ် အိန္ဒိယတိုက်နယ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား အမြောက်အများလည်း ထပ်ဝင်လာသည်။ ဒါကလည်း အမှန်တရားတစ်ခု။ ရှေးအစဉ်အဆက် နေထိုင်ခဲ့ကြသော ပသီကုလားအခေါ်ခံ ဋ္ဌာနေမွတ်စလင်မ်တို့နှင့် နောက်ရောက်လာသော အီန္ဒိယတိုက်နယ်(ယခု အန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်)သား မွတ်စလင်မ်များကြားတွင်ပင် လူမျိုးရေးဓလေ့ထုံးတမ်း ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကားတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပဋိပက္ခ တစ်ချို့ ရှိခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က အလုံးအရင်းနှင့် ဝင်လာသော အိန္ဒိယသား (ချစ်တီး၊ ဟိန္ဒူ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မွတ်စလင်မ်)တို့နှင့် နွယ်လာပြီး ဗမာပြည်တွင် အစဉ်အဆက်က လူ့အစုအဝေးတစ်ရပ်အဖြစ် ရှိခဲ့ပြီးသား ပသီကုလားများကိုပါ ဗမာလူထု၏အမြင် ပြောင်းလဲလာသည်။
မူလ ခေါ်ဆိုသည့် အသုံးအနှုန်း "ကုလား"၏ မူရင်းသဘောတရားလည်း ပြောင်းလဲသွားသည်။ မူရင်းကကဲ့သို့ နွေးထွေးမှု မရှိသော၊ ခွဲခြားလိုသော၊ အပြစ်မြင်လိုသောသဘော အတော်ဆောင်လာသည်။ ကုလားဒိန်၊ ကုလားကပြား၊ ကုလားမျိုးမစစ်၊ ဇေကပြားစသည့် စသည့် စကားလုံးများက မူလက ရှိခဲ့သည့် ပသီကုလားများ လက်သင့်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိဖြစ်လာသည်။
ထိုစဉ်က ကျွန်တော်တို့ အဖိုးများခေတ်က ပသီကုလားများသည် တစ်ဖက်က တို့ဗမာအစည်းအရုံး၊ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ စသည်တို့တွင် ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေးအတွက် တစ်တပ်တစ်အားမှ ကဏ္ဍစုံ ပါဝင်ခဲ့ကြသလို တစ်ဖက်ကလည်း မိမိတို့အား ခွဲခြား ရှုမြင်သော အသုံးအနှုန်း "ကုလား"ဟူသည်အား ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။ ဗမာမွတ်စလင်မ် နိုးကြားရေးအဖွဲ့ ကဲ့သို့သော အဖွဲ့များ ဖွဲ့ကာ မိမိတို့သည် ကုလား မဟုတ်ကြောင်း၊ ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာများ နည်းတူ ဒီမြေဒီရေတွင် ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် နှစ်ပေါင်းရာချီ နေထိုင်ခဲ့သော တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံသားများသာ ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် ဆိုခဲ့ကြသည်။ မိမိတို့သည် ဗမာမွတ်စလင်မ်များ ဖြစ်ကြကြောင်း ပြောခဲ့ကြသည်။
၀မ်းနည်းဘိ၏။" ဟူသော ကြွေးကြော်သံဖြင့် မိမိတို့သည်လည်း ဗမာများဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့ကြသည်။ "ဗမာကို ဗမာကသိရေး" ဆိုကာ မိမိတို့ ဗမာပြည်ဖွား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည်လည်း ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ နည်းတူ ဗမာဖြစ်ကြောင်း ဆိုခဲ့ကြသည်။
တိုင်းရင်းသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအား ဗမာမွတ်စလင် အမည်ခေါ်တွင်ရန် ဗမာမွတ်စလင်နိုးကြားရေးအဖွဲ့ချုပ်က သက်ဆိုင်ရာသို့တင်ပြ တောင်းဆိုသည်။ ထိုသည်၏ရလဒ်က ၁၉၃၀-ခုနှစ်တွင် ထိုစဉ်က(အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတည်းက)စ၍ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် ကုလား၊ ဇေရဘာဒီ၊ ဇေကပြား စသည်စသည် အမျိုးမျိုး ခေါ်ဝေါ်နေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား မွတ်စလင်မ်များ (ရှေးအခေါ် ပသီကုလားများ)အား ဗမာမွတ်စလင်မ်ဟုသာ တစ်မျိုးတည်းခေါ်ရန်အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့အား ဗမာမွတ်စလင်ဟု သန်းခေါင်စာရင်းတွင်လည်း တစ်သမတ်တည်း စာရင်း သတ်မှတ်ရန်ဟူ၍ ကြေညာချက် အမိန့်ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းပင်။
(စကားမစပ် တရုတ်ဆိုသော အခေါ်အဝေါ်သည်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပင်။ မြန်မာနိုင်ငံမှသာ ခေါ်သည့် စကားလုံးတစ်ခု။ သို့သော် မတူသည်က ယခုချိန်ထိ ထိုစကားလုံး သုံးနှုန်းခြင်းနောက်ကွယ်တွင် အခြား တစ်စုံတစ်ရာ သက်ရောက်မှု၊ နှိမ်ချမှု လုံးဝမရှိ၊ ဤအချက်က ကုလားနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်။)
၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၌ ကျင်းပခဲ့သော ရွှေတိဂုံအလယ်ပစ္စယံ လူထုအစည်းအဝေးပွဲကြီး၌ ဖဆပလအဖွဲ့မှ ဆရာကြီး ဒီးဒုတ် ဦးဘချိုမှ အဆိုအမှတ်(၆) တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အဆိုတင်သွင်းရာတွင်
၁၉၄၆-ခု ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက် မှ ၈ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့ဇိနတ်မိန်းကလေးကျောင်း၌ကျင်းပသော ဗမက ပြည်လုံးကျွတ် ညီလာခံကြီးမှ ဗမာမွတ်စလင်တို့သည် လူနည်းစုလော သို့မဟုတ် လူများစုလောဟူ၍ နှစ်ဖက်သဘောကွဲလွဲနေသည်။ ဆရာကြီးဦးရာဇတ်၏ သဘာပတိမဲသည် အဆုံးအဖြတ်မဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ဗမာမွတ်စလင်ကို လူများစုအဖြစ် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ လန်ဒန်တွင် ရောက်နေသော ဖဆပလဥက္ကဋ္ဌကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းထံသို့ ဗမာမွတ်စလင်လူများစုအဖြစ်နေရန်ဗမက ပြည်လုံးကျွတ်ညီလာခံမှ ဆုံးဖြတ်ကြောင်းကြေးနန်းပို့ခဲ့သည်။
ထိုဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ အာဇာနည်ကြီး ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုက ဒီဗမက (ဗမာမွတ်စလင်မ်ကွန်ဂရက်)ကလူတွေတော့ တစ်ချိန်မှာ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကုလားတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတော့မှာပဲဟု သံယောဇဉ်ဒေါသောဖြင့် ဆိုခဲ့ဖူးသည်။ သွေးထွက်အောင်မှန်ပါသည်။ နောက်လူတွေကိုလည်း ဗိုလ်ချုပ်တို့၊ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုတို့လိုပင် ပြည့်ဝသောခေါင်းဆောင်များဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ကြမိသည်ကိုး။ နောက်တစ်ချက်က တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် အပူတစ်ပြင်း ကြိုးပမ်းနေကြစဉ် မိမိတို့ တစ်ကိုယ်ရည်အတွက် အခွင့်အရေးပေးသည်ကိုပင် အပြည့်အဝ မယူမိခဲ့ကြ။ ဒီလိုခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ အကြာမီ လုပ်ကြံခံလိုက်ရပြီး တိုင်းပြည်အနာဂတ်က ဇောက်ထိုးမိုးမြှော် ပြောင်းသွားလိမ့်မည်ဟုလည်း ဘယ်သူကမှ မတွက်မိခဲ့ကြ။
၁၉၅၅ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုက ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်လက်အောက်ရှိ အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်သော ဗမကကို ဖျက်ခိုင်းစဉ်တွင်လည်း "ဗမက က ဗမာတွေပါ။ မွတ်စလင်မ်ဘာသာယူထားတဲ့ ဗမာတွေပါ။" ဟူသောစကားကို သုံးခဲ့သည်။ (၁၉၅၅ ဒီဇင်ဘာ၃၀ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ)
၁၉၈၂ခုနှစ် အောက်တိုဘာ၈ရက်နေ့ အလုံလမ်းရှိ သမ္မတအိမ်တော်တွင် အစည်းအဝေးကျင်းပရာတွင် မဆလဥက္ကဋ္ဌကြီး (တရုတ်ကပြားတစ်ဦးဖြစ်သည့်) ဦးနေဝင်း၏ မိန့်ခွန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် စိတ်ထိခိုက်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကုလား၊ ကုလားပြည်စသည့် အသုံးအနှုန်းများ လှိုင်လှိုင်သုံးကာ ဧည့်နိုင်ငံသားဟူသည်ကို စတင်ပြောခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းတွင် ရှိနေသည့် ကုလားများ (တရုတ်များလည်း သူ့မိန့်ခွန်းတွင်ပါပါသည်)သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သစ္စာဖောက်များပမာ သုးံစွဲသွားခဲ့ပါသည်။ (၁၉၈၂အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့ The Working People's Daily အင်္ဂလိပ်သတင်းစာတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အဆိုပါမိန့်ခွန်းဘာသာပြန် ပါရှိခဲ့သည်။)
၁၉၉၆ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့ တမန်တော်နေ့အခမ်းအနားသို့ သာသနာရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မျိုးညွန့်တက်ရောက်ကာ အမှာစကားပြောကြားခဲ့ရာတွင် "ဗမာပြည်ဖွား ဗမာမွတ်စလင်မ်များသည် ဗမာသာဖြစ်ကြောင်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်ခြင်းကြောင့် ကုလား ဖြစ်မသွား" ဟု ဆိုပြန်သည်။ နိုင်ငံတော် သတင်းစာများကလည်း အဆိုပါစကားရပ်ကို ကိုးကား ဖော်ပြခဲ့ကြပြန်သည်။
ယခု တစ်ခါ တစ်မျိုး ဆိုကြပြန်ပါပြီ။ မနှစ်က မြန်မာမွတ်စလင်မ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးခွန်းမေးရာတွင် ဦးခင်ရီက ဘင်္ဂါလီများကို ဆိုလိုသည်ဟု ထင်ကြောင်း အစချီကာ ပြောသွားခဲ့သည်။ မြန်မာပြည် အနှံ့အပြားတွင် ရှိနေသော ဗမာ မွတ်စလင်မ်တွေကို ဘင်္ဂါလီနှင့် ရောချဖြေသွားသည်။ တစ်ကြိမ်။
မကြာသေးမီက သတင်းစာ နှစ်စောင်တွင် ဒေါင်းယောင်ဆောင်သောကျီးအမည်ဖြင့် ဆောင်းပါး ပါလာပြန်သည်။ မွတ်စလင်မ်နှင့် ချစ်တီးကုလားကိုပင် ခွဲမသိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်က အဆင့်မရှိသည့် ပုံစံရေးခဲ့ပြန်သည်။ ရိုဟင်ဂျာကို ပြောသည်လား။ ပြည်တွင်းမှာ အစဉ်အဆက်နေလာသည့် မွတ်စလင်မ်များကိုပါ သိမ်းကျုံး ရည်ညွှန်းခဲ့သည်လား သာမန် စာဖတ်သူပင် အလွယ်တကူ ခွဲသိနိုင်ပါသည်။
ယခုတစ်ဖန် နိုင်ငံတော်ပိုင် သတင်းစာက နောက်တစ်ကြိမ် ဆိုပြန်ပါပြီ။ မွတ်စလင်မ်ကုလားတဲ့။ မွတိစလင်မ်ဘက်က မခံရပ်နိုင်မှန်းသိတော့ ပြင်ပေးသည်က "ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ် ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ" တဲ့။
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖြစ်လာစေရန် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူ မဟာသရေစည်သူဘွဲ့ရ သံအမတ်ကြီးဦးဖေခင် မကွယ်လွန်မီက ညီလာခံတစ်ခုတွင် "တို့ဗမာပြည်က ဗမာမွတ်စလင်မ်တွေအားလုံး ကုလားတွေကွ၊ နိုင်ငံခြားက ကူးလာတဲ့ မျိုးမစစ်တဲ့ကောင်တွေကွ၊ တို့ကို ကုလားလူမျိုးလို့သာ မှတ်ပုံတင်မှာ မင်းတို့ သတ္တိရှိရင် သတ်မှတ်ကြ…"ဟုဒေါသတစ်ကြီး ခံစားချက်တစ်ကြီး ပြောခဲ့ဖူးကြောင်း ထိုညီလာခံတွင် တက်ရောက်ခဲ့သူများ ပြန်ပြောပြသည်ကို ကြားဖူးပါသည်။
အဖိုးလေးဖြစ်သူ ဦးညီညီကလည်း ဆုံးခါနီးနောက်ပိုင်းအချိန်တွင် "ငါက ကုလားကြီးကွ၊ ငါက ကုလားကြီးကွ" ဟု တစ်ဖွဖွပြောခဲ့ပြန်ပါသည်။
စာရေးဆရာကြီး ပသီဦးကိုကိုလေး မဆုံးမီ လပိုင်းအလိုက စကားပြောဖြစ်ရာတွင်လည်း သူ့တစ်သက် ဘာပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ နောက်ဆုံး ကုလားကြီးက ကုလားကြီးပါပဲဟု ဆိုသွားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရှီအဟ်မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်တာ ဟာဂ်ျကလည်း သူ၏ညီအစ်ကို ရင်းချာများတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သော သူ၏မှတ်ပုံတင်တွင် လူမျိုး အီန္ဒိယ+ဗမာ ဖြစ်နေပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သည့် တစ်အူတုံဆင်း ညီနောင်က ဗမာလူမျိုး ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကို နိုင်ငံတော် တာဝန်ရှိသူများထံ မေးမြန်းတင်ပြခဲ့ဖူးသည်။
ကွယ်လွန်သူ ဆရာကြီး ဦးတင့်ဆွေ (မော်လဝီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်း) ဗိုလ်ချုပ်တို့ (သာသနာရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မျိုးညွန့်ကို မေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်) သတ်မှတ်တဲ့ လူမျိုးဆိုတာ လူတစ်ယောက်က မဟာဗန္ဒုလ ပန်းခြံလမ်းအတိုင်း လမ်းလျှောက်လာရာမှာ ဆူးလေဘုရားပေါ်တက်သွားရင် ဗမာစစ်စစ်၊ ဘေးက ဗလီပေါ်တက်ရင် အိန္ဒိယပေါင်းထည့်သည့် မူဝါဒပါလား ဟု မေးခဲ့ဖူးပါသည်။
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ပြောပါတော့မည်။ ကျွန်တော်သည် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာကောင်ဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်း အမှန်တစ်ကယ် မသိသူဖြစ်ပါသည်။
၁၀နှစ်ပြည့် မှတ်ပုံတင် ထွက်လာတော့ လူမျိုးဗမာ၊ ဘာသာအစ္စလာမ်တဲ့။ ကျွန်တော့် မိသားစု ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပါပင်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့၊ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်တို့၊ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုတို့ ချမှတ်ခဲ့သည့် လမ်းစဉ်ဟုဆိုရပါမည်။ (ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်က ထိုခေါင်းဆောင်များ မရှိကြတော့။) ထို့ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်က ဘာပြောပြော ဥပဒေကြောင်းအရ ငါသည် ဗမာတိုင်းရင်းသား ရယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ တိုက်ပုံကို မြတ်နိုးဂုဏ်ယူစွာ ဝတ်ခဲ့သည်။
အသက် ၂၃နှစ် အရွယ်ထိ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဗမာ ထင်ခဲ့သူ။ ထိုစဉ်ကမှ ညီငယ် ၁၈နှစ်ပြည့် မှတ်ပုံတင် ပြောင်းရတော့ တစ်မိသားစုလုံး၏ အိမ်ထောင်စုဇယားတွင် လူမျိုး ဗမာ ရှေ့တွင် အိန္ဒိယ ထပ်ပေါင်းခံရသူ။ ကျွန်တော့်သား မွေးတော့ အိမ်ထောင်စုဇယားတွင် ထည့်သွင်းချိန်တွင် သူ့လူမျိုးက "အိန္ဒိယ+ဗမာ+ ဗမာ+ အိန္ဒိယ+ပလောင်" ပါတဲ့။
မကြာမီ နှစ်ပေါင်း ၂၀၊၃၀ အတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူပါတော့မည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် ရှိနေသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များလည်း ထိုစာရင်းတွင် ပါဝင်ကြပါမည်။ ထိုသူတို့ကို ဘာလူမျိုးဟု သတ်မှတ်ပါမည်လဲ။ တစ်ညီတစ်ညွတ်ထဲ ကုလား လူမျိုးဟု ခေါ်ဝေါ် သတ်မှတ်မည်လော။ ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ မကြာမကြာ သုံးစွဲနေသည့် ဘင်္ဂါလီဟု စာရင်း သွင်းပေးမည်လော။ မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ သမီး မှတ်ပုံတင်တွင် ပါသလို အိန္ဒိယလူမျိုးလော။ (အတော် အထာမကြသည့် စကားလုံးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတွင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံသားသာရှိသည်၊ အိန္ဒိယလူမျိုးဟူ၍ မရှိ။ ဟင်ဒီလူမျိုးသာ ရှိမည်။ နိုင်ငံတစ်ခုအမည်နှင့် ဗမာ တွဲဖက်အဖော်ပြခံနေရသော ကျွန်တော်တို့ နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလူမျိုးအမည်သည် ရှာမှရှားဟု ဆိုရမည့် အံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။) မည်သည့် မူနှင့် ဆက်သွားကြပါမည်လဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေသည် မပြည့်ဝသော နိုင်ငံသားလား။ တစ်ပိုင်းတစ်စ နိုင်ငံသားလား။ မိမိတို့၏ မွေးရာပါအနေအထားအရ ရွေးချယ်ခွင့် မရှိဘဲ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဒီနိုင်ငံမှာ လူဖြစ်နေရသော ဘာမှန်းမသိသည့် သတ္တဝါများလား။ ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူဆိုသည်ကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ခြင်း မရှိပါခင်ဗျား။ နိုင်ငံတော် သီချင်းဆိုစဉ် " ဒါတို့ပြည်၊ ဒါတို့မြေ တို့ပိုင်နက်မြေ"ကို လိပ်ပြာလုံလုံ ဆိုခွင့် ရှိသောသူများ ၊ ဒီမြေဒီရေကို ချစ်ပိုင်ခွင့် ရှိသောသူများ ဟုတ်ပါရဲ့လားခင်ဗျား။
လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသူရ ရွှေမန်း နှင့် ပြည်သူတို့အားထားရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ အမှူးပြုသော လွှတ်တော်အသီးသီးမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်၊ အချိန်တိုလေးအတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွယ အံ့အားသင့်ရလောက်အောင် လုပ်ပြသွားခဲ့သည့် ပြည်သူတို့၏သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် အမှူးပြုသော အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်၊ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း၊ ဦးခင်ရီ စသည်တို့ဦးဆောင်သည့် နိုင်ငံတော် ပြန်ကြားရေး တာဝန်ရှိသူများနှင့် စာနယ်ဇင်း သတင်းမီဒီယာ အသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုသည့် စတုထ္တမဏ္ဍိုင်၊ ထိုသည့်နောက် ပဉ္စမမဏ္ဍိုင်ဟု တင်စား ခေါ်ဆိုလိုသည့် ဘာသာ သာသနာအသီးသီးမှ ဆရာတော် သံဃာတော်ကြီးများ၊ ဓမ္မဆရာများ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆော်များကို စာရှုသူ မိတ်ဆွေက ကျွန်တော့် ကိုယ်စား မေးပေးပါလားခင်ဗျား။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် ဘာကောင်မှန်း မသိတော့လို့ပါ။ ကျွန်တော်သည် မြန်မာပြည်တွင် ဘာပါလဲခင်ဗျား။
ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုက ၁၉၅၅ခုနှစ်တွင် ဗမက ဖျက်ခိုင်းစဉ်က ခင်ဗျားတို့ ဗမာမွတ်စလင်မ်တွေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကုလားလား ဗမာလား စဉ်းစားတာ နှစ်မိနစ်မကြာပါဘူးဟု ထည့်သွင်း ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ သူကတော့ ဘာကြောင့် နှစ်မိနစ်မကြာဟု ထင်သည်မသိ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ နှစ်၃၀နီးပါး ကြာနေပါပြီ၊ အဖြေမရသေးပါခင်ဗျား။ နှစ်မိနစ် မကြာနိုင်သည်က ကုလားဖြစ်လို့ဟုသာ ယူဆရပါမည်လား။
ကုလား၊ ကပြား၊ သွေးနှော၊ အိန္ဒိယဗမာ၊ ပသီကုလား၊ မျိုးမစစ်၊ ဗမာမွတ်စလင်မ် မည်သို့ခေါ်ခေါ် ကျွန်တော့်တွင် (အနည်းဆုံး အထက်အဆက် ၄ဆက်တွင် မဟုတ်သည့်) မည်သည့် အဆက်အနွယ်ကမှန်း သေချာမသိသော နိုင်ငံခြားသားသွေး (ကုလားသွေး) ပါပါသည်။ တစ်ဖက်ကလည်း ဗမာသွေး တိုင်းရင်းသားသွေး ပါပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့သည် ဒီမြေမှာပဲနေကြကာ ဒီမြေမှာပဲ သေကြရမည့် မနည်းလှသည့် လူ့အစုအဝေးတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဒီမြေဒီရေတွင် ကြီးပြင်းလာရသည့် ကျွန်တော်တို့တွင် အခြားလည်း သွားစရာ မရှိ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားထွက်လျင်လည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးက သတ်မှတ်သည်က ကျွန်တော်တို့ "ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ် ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ"သည် အခြား နိုင်င်ငံသားများနည်းတူ ပတ်စပို့တ်အနီကိုင် မြန်မာများသာ။
ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် ဗမာသွေးပါမှုအရ ကျန်ဗမာများနှင့် ညီနောင်ဝမ်းကွဲဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ ကျန်ဗမာများကရော တော်သည့်သွေးကိုကြည့်ကာ ဝမ်းကွဲညီနောင်အဖြစ် လက်တွဲလိုပါသလား၊ ညီနောင်ရင်းချာ တစ်အူတုံဆင်း မဟုတ်သည့်အတွက် ဆွေခန်းမျိုးခန်း ဖြတ်လိုပါသလား။
မကင်းနိုင်သည့်အတူတူ တဲ့အောင် အဆင်ပြေအောင် နေကြလျင် အကောင်းဆုံး မဟုတ်ပါလားခင်ဗျား။
Posted: 23 Aug 2012 06:43 AM PDT
ဒီလိုနဲ့ပဲပေါ့လေ … သေပြီးသား ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် အပါအဝင် ၂၀၀၈မှာ ၁၈နှစ်ပြည့်သွားသူ ကျွန်တော့်ညီ၊ ၂၆နှစ်အရွယ် ကျွန်တော်၊ မိဘတွေအားလုံး အိမ်ထောင်စု ဇယားမှာ "အိန္ဒိယဗမာ" အဖြစ် လူမျိုးပြောင်းမင်္ဂလာ ခံယူခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်း အိမ်ထောင်စုဇယားမှာ "အိန္ဒိယဗမာ" လူမျိုး ဖြစ်သွားတော့ နောက်ဇာတ်လမ်းက သွေးနှောတွေအတွက် မှတ်ပုံတင်က မြို့နယ်ရုံးက လုပ်မပေးပါ။ တိုင်းရုံးက အတည်ပြုမှာဆိုတော့ တိုင်းရုံးကိုဆက်ပါ တဲ့။
ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ သတင်းကောင်း တစ်ခု ကြားရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဒေါ်က အဖိုးရဲ့ မှတ်ပုံတင်ကို ဓာတ်ပုံရိုက် သိမ်းထားတာရှိနေတယ်လေ။ (ဆုံးတာက ၁၉၈၇၊ မိတ္တူကူးစက် မရှိသေးတဲ့အချိန်၊ အတော်ကံကောင်းလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်တာ ရှိထားတာပါ။) အဲဒါနဲ့ တွဲတင်တော့မှ အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်အပြီး နောက်ဆုံး သုံးလေးလအကြာမှာ နဂိုမူလအတိုင်း နိုင်ငံသားကဒ် ရပါတယ်။ လူမျိုးကတော့ "အိန္ဒိယဗမာ" အဖြစ်နဲ့ပေါ့။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မိသားစုဟာ ၂၀၀၈ မတိုင်ခင်ထိ အားလုံး ဗမာ၊ အဲဒီနောက် အိမ်ထောင်စုဇယားအရ"အိန္ဒိယဗမာ"၊ မှတ်ပုံတင်များမှာ ဗမာ၊ ကျွန်တော့်ညီတစ်ယောက်ကတော့ မှတ်ပုံတင်မှာလည်း "အိန္ဒိယဗမာ"။
မနှစ်က နယ်ဘက်က ကျွန်တော့် အမျိုးတွေဆီ အလည်သွားတုန်း အသက် ၁၀နှစ်ကျော်ကျော် တူဝမ်းကွဲတော်သူက ကျောင်းကနေအိမ်ကို မျက်စိမျက်နှာပျက်ပြီး ပြန်လာပါတယ်။ အိမ်လည်းရောက်ရော တုန်ရီပြီး ငိုသံကြီးနဲ့ ပြောပြပါတယ်။ သူ့ကို ဖမ်းကြတော့မယ်ထင်တယ်၊ သူဘာမှလည်း အပြစ်မလုပ်မိဘဲနဲ့တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဘာများဖြစ်လဲ စိုးရိမ်သွားကြတာပေါ့။ မေးကြည့်တော့ ကျောင်းမှာ မှတ်ပုံတင် လိုက်လုပ်ပေးတာ (သူနဲ့ ညီအစ်ကို တစ်ဝမ်းကွဲတော်သူ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ ကျွန်တော့်တူတစ်ဦး အပါအဝင်) အတန်းဖော်အားလုံးကို မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးပေမယ့် အခန်းတွင်းမှာ တစ်ဦးတည်းသောမွတ်စလင်မ်ဖြစ်တဲ့ သူ့အတွက် ဖြည့်ထားတဲ့ဖိုင်မှာ "သံသယ" ဆိုပြီး ရေးသွားတယ်၊ မှတ်ပုံတင်တော့ မရဘူးတဲ့။ ကလေးတစ်ယောက်အတွက်တော့ ခံစားချက်တော်တော်ပြင်းစေတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါ။
၃။ "မှတ်ပုံတင် လက်ဝယ်မရှိသူဆိုရင် နိုင်ငံသား မဟုတ်နိုင်ဘူးလား" ဆိုတာကလည်း အချက်ပေါင်းများစွာကို ထည့်စဉ်းစားမှ အဖြေမှန်ရမှာပါ။ နိုင်ငံတွင်း (ပြည်မ၊ အလယ်တည့်တည့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးလို မြို့ကြီးများမှာ) နေသူတွေအတွက်တောင် မှတ်ပုံတင် ဒီလောက်ခက်နေရင်၊ နယ်ရောက်နေကြသူများအတွက် ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ မစဉ်းစားတတ်ပါ။
Posted: 23 Aug 2012 06:11 AM PDT
Posted: 23 Aug 2012 06:06 AM PDT
ရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာရယ် ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုလည်းဖြစ်တဲ့ ရခိုင်သတင်း ဌာနတခုက ဒီကိစ္စကို လူမျိုးရေးဘာသာရေးစကားလုံးတွေနဲ့တသီကြီးဖော်ပြထားထာတွေ့ လိုက်တော့ ဒါဆို ရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူး၊ တခုခုတော့ဖြစ်တော့မှာ သေချာတယ်ပေါ့။ သိပ်မကြာပါဘူး။ ခရီးသွား အစ္စလာမ် ၁၀ ယောက် အသတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုပြီး မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ရိုက်ခတ်သွားတယ်။
ဒီကိစ္စကို ကျနော်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင် ရခိုင်တွေဟာ ရိုဟင်ဂျာမုန်းတာနဲ့ တတိုင်းပြည်လုံးကို အပူအပင်တွေ ပြဿနာတွေ တင်ပို့ နေတယ်လို့ မြင်တယ်။ ထင်ရာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ၊ အတွေ့ အကြုံတွေအရ မြင်ရာကိုပြောတာပါ။ ဆိုလိုတာက ဒီလိုပါ။
ကျနော် နယ်စပ်မှာ အကြာကြီးနေဖူးပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူငယ်ကိစ္စတွေအများကြီးသွား ဖူးတယ်။ ကျနော်ဘ၀င်မကျတာတခုက ဘာလဲဆိုရင် ရခိုင်တွေဟာ အ မျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် အရမ်းပြင်းထန်တယ်ဗျာ။ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ထက် ကိုယ့်လူမျိုးရေးတခုတည်းကို အရမ်းရှေ့ တန်းတင်တယ်။ တနိုင်ငံလုံးအတွက် ခြုံပြီး ရိုးရိုးသားသားဝေဖန်တာပါ။ ကျနော်တို့အစည်းအဝေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် ရခိုင်တွေက ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စကား ၁ ခွန်းလေးတောင်ပေး မပြောဘူး။ မတော်လို့အဲ့ဒီစကားလုံးထွက်သွားရင်တောင် ကျနော်တို့ အပြောခံရတော့တာပါပဲ။ ကျနော်တို့ က ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုတော့ ဘင်္ဂလီကုလားလို့ ပဲခေါ်တဲ့။ ကုလားဆိုတာ နှိမ်ချပြီးခေါ်မှန်းသိရက်နဲ့ ရခိုင်တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး မပျက်ချင်တော့ အဲ့ဒီလိုပဲလိုက်ခေါ်ကြရတယ်။ လူ့ အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဝေါ့ရှော့ ကြီးတွေသွားပြီး ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ လူတွေခံနေရတာကို မသိကျိုးကျွံပြုကြရတယ်။ ရခိုင်အကြိုက်လိုက်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံကြရတယ်။
အစည်းအဝေးမဟုတ်ဘဲ အင်ဖော်မာစကားပြောပွဲလုပ်တာတို့အလုပ်သင်တန်း ဝေါ့ရှော့တို့ လုပ်လို့ရိုဟင်ဂျာ လူငယ်တယောက်ယောက်ကိုဖိတ်မိရင်တောင် ရိုဟင်ဂျာကိုထွက်ခိုင်းရင်ထွက် မထွက်ခိုင်းရင် ကျနော်တို့ကျမတို့ ထွက်မယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားကြတယ်။ တခါတလေ အီးမေးပို့ လို့ရိုဟင်ဂျာ တစ်ယောက်လောက် ပါသွားရင်တောင် သူတို့ ကိုပို့ ရကောင်းလားဆိုပြီး ပြသနာရှာခံရတယ်။
ကျနော်တို့ က ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ခုနက အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဆိုတာ လည်း တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရေး မဖြစ်ရေး မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ တရုတ်တို့ ဘာတို့သံယံဇာတထုတ်တဲ့ကိစ္စတို့ ၊ ဒုက္ခသည်အခွင့်အရေး၊ အခြေခံလူ့ အခွင့်အရေးတို့ နဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတို့ ပါ။ ဒုက္ခသည်အရေး စုပေါင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ကိစ္စအတွက် ရိုဟင်ဂျာကို မဆက်သွယ်ရင် ဘယ်သူ့ ကိုဆက်သွယ်ရမလဲခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ လည်း မသွားနိုင်၊ ဘာမှလည်းလုပ်မပေးတတ်။ ဘင်္ဂလားမှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်ကိစ္စ ရိုဟင်ဂျာကို မခေါ်ရင် ကျနော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။
ဒီလိုကိစ္စတွေမှာတောင် လုံးဝဆက်ဆက်ထိမခံဘဲ။ လူဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးလေးတော့ နဲနဲလေးစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ပြောတော့ ဒါဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာတွေကို ခင်ဗျားတို့ပြည်နယ်မှာ ခေါ်ထားပါလားဆိုပြီးတမျိုး၊ အဲ့ဒီကိစ္စဟာ ရခိုင်ပြည်ကိစ္စဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ဝင်မပြောနဲ့ ဆိုပြီးတခါပြောတယ်။
ဒီလိုဆိုရင် ကျနော်ပြောချင်တယ်ဗျာ။ ရခိုင်-ရိုဟင်ဂျာအရေးက ရခိုင်ပြည်ကိစ္စချည်းဆို ခုဘာဖြစ်လို့ ရခိုင်ပြသနာကို တနိုင်ငံလုံးဆီထိ တင်ပို့ ရတာလဲ။ ရခိုင်ပြည်မှာသတ်တဲ့ကိစ္စ မြန်မာပြည်တခုလုံးပူပန်ရပြီ။ ရခိုင်တွေက ရိုဟင်ဂျာမုန်းတယ်ဆိုပြီး ဘာသာရေးတခုလုံးကို ခြုံပြောတာတွေ၊ ကုလားကုလားဆိုပြီး ခြုံငုံပြောဆိုတာတွေ အမြဲကြားနေရတော့ စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ။
နောက်တခုက — ရခိုင်တွေဟာ ရိုဟင်ဂျာကိုချည်းမဟုတ်၊ ဗမာတွေကိုလည်း အရမ်းမုန်းတယ်။ အစည်းအဝေးတိုင်းမှာ မဟာဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုပြီး ဗမာတွေ ကိုလည်း အကောင်းတစက်မှမမြင်ဘူး။
တခါက ဘန်ကောက်က ချူလာလောင်ကုန်းတက္ကသိုလ်မှာ ကလေးစစ်သားကိစ္စ နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးလုပ်တော့ အဲ့ဒီမှာလည်း ဗမာတွေ ရခိုင့်နိုင် ငံတော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ဗမာတွေမကောင်းကြောင်း စကားလုံးကြမ်းကြမ်းတွေနဲ့ကတုန်ကယင်ထပြောတော့ ကျနော်တို့ တွေ တော်တော် မျက်နှာပူရတယ်။ ဘယ်သွားသွား ဒီလိုကြုံရတော့ မျက်နှာအရမ်းပူရတယ်။ အဲ့လိုမဖြစ်အောင်အကြံပေးတိုင်း ခင်ဗျားနဲ့ဗမာအမျိုးတော်လားဆိုပြီးတခါ၊ ဒူးမနာသားဆိုပြီးတမျိုး အပြောခံရသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းဆို အစည်းအဝေးတွေသွားရင် ကျနော် ဘယ်တိုင်းရင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ရခိုင်မဟုတ်မှန်း အ စည်းအဝေးတက်သမားတွေသိအောင် ထုတ်ပြောရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်လာတယ်။ တခြားအများကြီးရှိသေးတယ်။ နယ်စပ်မှာ တိုင်းရင်းသား ကိစ္စလှုပ်ရှား နေတဲ့လူ တိုင်းသိပါတယ်။ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း ကိုယ့်အထုပ်ကိုယ်မရှင်းနိုင်တာတမျိုး၊ ရခိုင်က အုပ်စုတောင့်တော့ သူတို့ နဲ့ပြသနာမဖြစ်ချင်တာနဲ့နှုတ် ပိတ်နေရတယ်။
ဗမာတွေ ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကို နှိပ်စက်တာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြောတာဆိုတာမှာ သူ့ နေရာနဲ့ သူပေါ့ဗျာ။ ဗမာစစ်တပ်မကောင်းတိုင်း ဗမာတခုလုံးကို သိမ်းကြုံးပြောနေတာလည်း မဟုတ်သေးဘူး။ ဗမာစစ်တပ်လို့ပြောပြောနေတဲ့ စစ်တပ်မှာတောင် ချင်းတွေ၊ ရခိုင်တွေ၊ ရှမ်းတွေ၊ ရှိသေးတာပဲ။ မြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်း တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ မုဒိန်းမှုတွေကျူးလွန်တဲ့ထဲမှာ ရခိုင်တပ်တွေ တော်တော်ဆိုးတယ်။ အရင်တုန်းက စစ်တပ်အချင်းချင်းပို့ တဲ့ ကြေးနန်းသတင်းတွေ ခနခနဖတ်ရတယ်။ သတင်းတွေမှာ မုဒိန်းမှုဖြစ်ပြီဆိုရင် ခနနေ ရခိုင်တပ်၊ ခုနေ ရခိုင်တပ်။ ခနခနကြားနေရတာပဲ။ ဆိုလိုတာက မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ စစ်တပ်တောင်မှ ဗမာ ဗမာ ခြုံပြောလို့မရဘူးလို့ ပြောတာပါ။ နောက်ပြီးတော့ ရခိုင်တွေလည်း မုဒိန်းမှုကျူးလွန်တယ်ဆိုတာ ပြောချင်တယ်။ ဒါအမှန်တရားပါပဲ။ မယုံရင် စောင့်ကြည့်ပါ၊ အမှန်တရားကို ထုတ်ဖော်ပြောလို့ ရတဲ့တနေ့ ကြရင် ဒါတွေပေါ်လာပါမယ်။
နောက်တခုကျနော်ပြောချင်တာက ဘာသာရေး။ ရခိုင်အများစုက ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော့ ရခိုင်အမျိုးသားရေးဝါဒက ဗုဒ္ဓဘာသာမပါရင်မပြီးဘူးဖြစ်နေတယ်။ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စပြောရင် ရိုဟင်ဂျာချည်းပြသနာမဟုတ်တော့ဘူး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လွမ်းမိုးတော့မှာမလို့ ဆိုပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာကိုပါတိုက်တော့တယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုင်ပြီးပြောလာဆိုလာတော့ ဗမာအများစု ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကာကွယ်ရေးတို့ ၊ မြန်မာပြည်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း ပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာတတိုင်းပြည်လုံး စည်ပင်ထွန်းကားရေးဆိုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပရိုမုတ်လုပ်ကြရော။ ဒီနေရာမှာ ကြားထဲက ခံရတာက ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းပြပြီး ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေကို ဖျက်ဆီးတယ်၊ တရားဟောဆရာတွေကိုဖမ်းတယ်၊ နှိပ်စက်တယ်။ ချင်းပြည်နဲ့ကချင်ပြည်မှာ ဒီလိုတွေ အများကြီး အများကြီး။ ကရင်ပြည်မှာတော့ ပြောမနေတော့နဲ့ပေါ့ဗျာ။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ချရ်ှကိုသိမ်းပြီး စစ်စခန်းဆောက်လိုက်တယ်ဗျာ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွေ မမြင်ချင်ဘူးဆိုလို့ကျနော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပဲ ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ ကိုယ် သွား ဖြုတ်ပေးခဲ့ရတယ်။ ရခိုင်တွေကြောင့် ကျနော်တို့ လည်း ထိခိုက်နေတယ်။
Photo: Mandalay Gazette
အခုနောက်ဆုံး လူ ၁၀ ယောက်သတ်မှုကိုလည်း ကြည့်ကြည့်ပါ။ အသတ်ခံရတဲ့လူတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ့ ရတယ်ဗျာ။ မသေမချင်းရိုက်သတ်ထားတာ ခေါင်း တွေဟာပေါက်ပြဲထွက်ပြီး ရစရာမရှိလောက်အောင် ရိုက်ထားတယ်။ ရခိုင် ညီအကိုတွေကိုပြောချင်ပါတယ်ဗျာ – လူသတ်မှုမှာ ဂုဏ်ယူစရာဆိုတာမရှိ ပါဘူးလို့ ။ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အစွန်းရောက်မှုမှာ ဂုဏ်ယူစရာ ဆင်နွဲစရာမရှိပါဘူးလို့ ။ ခုလိုဖြစ်တော့ ရခိုင်အားလုံးရဲ့သိက္ခာပိုပြီးတော့ ကျဆင်းသွားပြီ။
ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။ ရိုဟင်ဂျာမုန်းတာတော့ ဘာမှမပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရိုဟင်ဂျာမုန်း တယ်ဆိုပြီး အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဆဲနေဆိုနေတဲ့ စကားလုံးတွေကို သတိထားကြည့်ပါ။ တကယ့် မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန်ပါပဲ။ အပြင်မှာလည်းဒီလိုပါပဲ။
ရခိုင်တွေက သူ့ လူမျိုးအတွက်ဆိုပြီး လူမျိုးရေးဝါဒတွေကြီးထွားပြီး မဆင်မခြင် တတိုင်းပြည် လုံးကလူတွေကို ရိုဟင်ဂျာမုန်းတီးရေးတင်မက ခုနောက် ဆုံး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုပါ ရန်ရှာတဲ့အထိဖြစ်လာပြီ။ ရိုဟင်ဂျာကို ရန်ရှာတုန်းက ပြသနာက သေးသေးလေးပေမဲ့ အစ္စလာမ်တခုလုံးကို ရန်ရှာရင် ဒါ တတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာတွေကို ရန်သွားရှာလို့ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြစ်သွားပြီ။ ရိုဟင်ဂျာကို အကြောင်းပြပြီး တတိုင်းပြည်လုံးကို အပူလှိုင်းတွေတိုက်ပေးသလိုဖြစ်နေပြီ။ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားလူငယ်အတွေကလည်း မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းဆိုသလိုသာ ရခိုင်တွေကို ဆက်ဆံနေရတာ။ ခုလိုမျိုးထိဖြစ်လာတော့ အောင့်နမ်းရမှာတောင် စိတ်ထဲမကောင်းလှဘူးဗျာ။ သိသိနဲ့ပါးစပ်ပိတ်ထားရတာ၊ ချိုးဖောက်ခံနေရတာ သိသိနဲ့ မျက် ကွယ်ပြုနေရတော့ လူ့ အခွင့်အရေးဆိုတာပြောဖို့လိပ်ပြာမလုံတာကြာပြီ။
ဒီနေရာမှာ ကျနော့်အနေနဲ့ကျနော့် တိုင်းရင်းသား ညီအကိုမောင်နှမတွေကို တခုပြောချင်ပါတယ်။ ရခိုင်လူသတ်မှုကို သင်ခန်းစာယူပါ။ ရခိုင်တွေကို နိုင်ငံတကာက အရင်တုန်းက အမျိုးသားရေးဝါဒပျင်းထန်သမားတွေလို့ ပဲသိတယ်။ ဗမာတွေကို ကျနော်တို့မဟာဗဟာလူမျိုးကြီးဝါဒီဆိုပြီး စွပ်စွဲသလို ရခိုင်တွေကိုလည်း နိုင်ငံတကာက လူမျိုးကြီးသမားတွေလို့ ပဲသိတယ်။ ခုတော့ racist (လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့လူတွေ) လို့ တင်မက ဒါမှမဟုတ် ခုလို လူသတ်မှုတွေပါဖြစ်တော့ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့သတ်မှတ်ကြတော့မှာ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ နှစ် လောက်ကတည်းက အင်တာနက်မှာ လူမျိုးရေးတိုက်ခိုက်တာတွေ ဘာသာရေး တိုက်ခိုက်တာတွေ တွေ့ ရတော့ နဲနဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ပိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်လာရတာတော့ ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားလူငယ်လေးတွေကပါ သူများနားယောင်ပြီး ဒေါသတွေဖြစ်ပြ၊ မူစလင်တွေကို လိုက်ဆဲကြနဲ့ မြင်ရတော့ လူငယ်တွေခမြာ သူတို့ ရဲ့တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခံနေရပါလားပေါ့။
ကျနော် ရိုဟင်ဂျာဖက်လိုက်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါ။ ခုဖြစ်တဲ့ရခိုင် ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာ ရခိုင်ပြည်သူတွေလည်းနာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ အတိုင်းအဆမဲ့ပိုနာတယ်၊ လုံခြုံရေးတွေနဲ့ ရခိုင်တွေပေါင်းပြီး အကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ထားတယ်ဆိုတာတွေ သတင်းတွေ ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေ အတိအကျရထားတယ်။ ဒါတွေမြင်တော့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘယ်လောက်ထိခိုက်ပျက်ဆီးသွားတယ်ဆိုတာ ရခိုင်တွေခံရတာထက် အများကြီး အများကြီးဆိုးပါတယ်။
ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေရော ဗမာတွေရော ရခိုင်အစွန်းရောက်တစုရဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေး မှိုင်းမမိပါစနဲ့ လို့အကြံပေးလိုပါတယ်ဗျာ။ တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းဖို့သွားနေရတဲ့အချိန်မှာ လူတစုရဲ့မိုက်ကန်းမှုကြောင့် သူခိုးဓားရိုးကမ်းမဖြစ်စေဖို့လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ကိစ္စတွေမှာ ရှောင်ပေးကြပါ။
ဆောင်းပါးရှင်၏ အမြင်နှင့် အာဘော်ဖြစ်သည်။
Posted: 23 Aug 2012 07:34 AM PDT
Hanya satu jawapan: WAJIB turunkan UMNO BN di dalam PRU13 nanti.
Posted: 23 Aug 2012 05:31 AM PDT
Our collective excitement at the possibility that the Assad regime will be destroyed, and the Iranian ayatollahs weakened in the process, is blurring our vision and preventing us from seeing the rise of al-Qaeda in Syria. In March of this year, jihadis mounted seven attacks against Assad. By June, they had led 66 "operations," and over half of these were on Syria's capital, Damascus. The Syrian opposition is benefiting hugely from the terrorist organization's determination, discipline, combat experience, religious fervor, and ability to strike the Assad regime where it hurts most.The territory in the Middle East that al-Qaeda covets most is of course Saudi Arabia, but Syria is next on the list. Now, Syria is not Syria to jihadis, but part of Bilaad al-Shaam, what the region was called when when borders did not divide the lands we now call Jordan, Syria, Lebanon, and, crucially, Israel and the Palestinian territories.
To al-Qaeda, these modern-day countries are based on artificial borders created after the First World War by the British and French, descendants of the eleventh-century Crusaders who occupied Jerusalem. Yes, al-Qaeda hasalong historical memory, but it also has plans for its future. And in Bilaad al-Shaam, the future is looking good for al-Qaeda.
As long as Assad governs Syria, brigades of Arab and other Muslim fighters will continue to gather in Bilaad al-Shaam to support the jihad of the Sunni Muslims against an Alawite infidel, as they see it. Assad offers themarallying point. In the process, al-Qaeda's local franchises will win support and create alliances with Syria's tribes and Sunni religious leaders. In the event of Assad's falling, al-Qaeda will probably gain de facto control of parts of Syria to serve asanew strategic base for jihadis in the Middle East, or at least enjoy tribal protection in the broader regions with Iraq and Jordan. A new government in Syria not only will be indebted to these fighters, but also will be in need of their cooperation to minimize the potential of militias fighting each other.
12Next From the National Review
Posted: 23 Aug 2012 05:13 AM PDT
Here are some extracts from Daniel Pipes essay:
"'Alawi" is the term that 'Alawis (also called 'Alawites) usually apply to themselves ; but until 1920 they were known to the outside world as Nusayris or Ansaris. The change in name - imposed by the French upon their seizure of control in Syria - has significance. Whereas "Nusayri" emphasizes the group's differences from Islam, "'Alawi" suggests an adherent of 'Ali (the son-in-law of the Prophet Muhammad) and accentuates the religion's similarities to Shi'i Islam. Consequently, opponents of the Asad regime habitually use the former term, while its supporters use the latter. 'Alawis today number approximately 1.3 million, of which aboutamillion live in Syria. They constitute some 12 percent of the Syrian population. Three-quarters of the Syrian 'Alawis live in Latakia,aprovince in the northwest of Syria, where they make up almost two-thirds of the population.
The Islamic religion reservesaspecial hostility for 'Alawis. Like other post-Islamic sects (such as the Baha'is and Ahmadis), they are seen to contradict the key Islamic tenet that God's last revelation went to Muhammad, and this Muslims find utterly unacceptable. Islamic law acknowledges the legitimacy of Judaism and Christianity because those religions preceded Islam; accordingly, Jews and Christians may maintain their faiths. But 'Alawis are denied this privilege. Indeed, the precepts of Islam call for apostates like the 'Alawis to be sold into slavery or executed. In the nineteenth century,aSunni shaykh, Ibrahim al-Maghribi, issuedafatwa to the effect that Muslims may freely take 'Alawi property and lives; andaBritish traveler records being told, "these Ansayrii, it is better to kill one than to prayawhole day." Frequently persecuted-some 20,000 were massacred in 1317 and half that number in 1516, the 'Alawis insulated themselves geographically from the outside world by staying within their own rural regions. Jacques Weulersse explained their predicament:
E. Janot described the problem: "Bullied by the Turks, victim ofadetermined ostracism, fleeced by his Muslim landlord, the 'Alawi hardly dared leave his mountain region, where isolation and poverty itself protected him." In the late 1920s, less than half of one percent lived in towns: just 771 'Alawis out ofapopulation of 176,285. In 1945, just 56 'Alawis were recorded living in Damascus (though many others may have been hiding their identity). For good reason, "the name Nusayri became synonymous with peasant." The few 'Alawis who did live away from their mountain routinely practiced taqiya. Even today, 'Alawis dominate the rural areas of Latakia but make up only 11 percent of the residents in that region's capital city. Read the whole well written piece here, by Daniel Pipes. Incidentally he is of the Juice Faith.
Posted: 23 Aug 2012 04:01 AM PDT
ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပညာသင်ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီးက ငြင်းစရာ ခေါင်းစီး မဟုတ်ပါ။ သူတို့ဆီမှာ ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းများသာ လွှမ်းမိုးနေတယ်- ဒါကြောင့် သူတို့မှာခေတ်ပညာတွေ အားနည်းနေတယ် ဆိုတဲ့ စကား ဟာလည်း မငြင်းနိုင်တဲ့ စကားရပ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရအဆက်ဆက် ဖိနှိပ်မောင်းထုတ် သုတ်သင်မှု ကျေးဇူးများကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကစ ဒီနေ့ ထိ ကမ္ဘာ့အရပ်ရပ်ကို ပြန့်နှံ့လွင့်စင်ခဲ့ရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေထဲမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ ပရော်ဖက်ဆာကြီးတွေ၊ ဆရာဝန်ကြီး တွေ၊ အင်ဂျင်နီယာကြီးတွေ၊ သတင်းနဲ့မီဒီယာ ပညာရှင်ကြီးတွေ၊ နောက်ဆုံး NASA မှာတောင် အဓိကနေရာ ဖြစ်တဲ့ NASA ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် တာဝန်ခံကြီးအထိ ရာနှုန်းများစွာ ရှိနေပါပြီ။- သက်ဆိုင်ရာ လူမျိုးအလိုက် ရာ နှုန်းကို တွက်ကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ လူမျိုးအားလုံးထက် ရိုဟင်ဂျာ ပညာတတ်၊ လူချမ်းသာများက ရာ နှုန်း ပိုများနေပါပြီ။- သူတို့တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ လူမျိုးစုလေးကို အလွန်တရာ ပညာတတ်စေချင်ပါတယ်၊ လူ လား မြောက်စေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပညာသင်ပေးခွင့်၊ ပညာရေး အထောက်အကူပြု ပစ္စည်များ ထောက်ပံ့ ပေးခွင့် လုံးဝ မပေးခဲ့တာ ဘယ်သူတွေ ဖြစ်ပါသလဲ– ဆိုတာကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားပေးရပါမယ်။ ဒါတွေကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားပေးခြင်း မရှိဘဲ–
ရခိုင်ပြသနာဟာ ပညာအင်အားနည်းပါးပြီး ဆင်ခြင်မှု အားနည်းနေသူတွေက ရိုဟင်ဂျာများ ဖြစ်နေသယောင် သမ္မတကြီးရဲ့ စကား အရောင်တင် ပြောဆိုမှုများကိုတော့ အင်တာဗျူးကို နားထောင်မိသူ၊ (ဖတ်မိသူ) အားလုံး သိမြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို ဆိုရင် သမ္မတကြီးက ရိုဟင်ဂျာ မဟုတ်သူများက ပညာတတ်တယ်၊ ဆင်ခြင်နိုင်အား ရှိတယ်လို့ ခံစား နေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြန်လည် သုံးသပ်ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။
(၁) ပြင်ပ ပရောဂများက ပြောသမျှ ယုံနေတာ ပညာမတတ် လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်- အဲ့ဒီ ပညာမတတ်သူများ ဆိုတာ မျိုးချစ်ဗုဒ္ဓဘာသာများ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ အရင်အဦး ၀င်ခံရပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ရမ်းဗြဲ မြို့နယ်က အဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှု ဆိုတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကို တစ်ကယ် ဟုတ် မဟုတ် မစူးစမ်း မဆင်ခြင်ဘဲ မျက်လုံးစုံမှိတ် လိုက်ယုံလိုက်တာက မျိုးချစ်ဗုဒ္ဓဘာသာများသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာတတ်လို့ ခံယူနေတဲ့ မဟာလူမျိုးကြီး ၀င်နေ သူ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်များက ဒီနေ့ထိ အမှုကို တိတိကျကျ ကမ္ဘာရှေ့မှာ အစစ်မခံရဲဘဲ တရားခံကို ဖျောက် ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့လို တရားခံကို ဖျောက်ဖျက်လိုက်ရင် အမှုက ငါတို့ပြောသမျှ အမှန်ဖြစ်ပြီလို့ ဆက်လက် တွေးခေါ်ပုံကလည်း အလွန်ပညာတတ်တဲ့ လက္ခဏာများ ဖြစ်နေပြန်ပါသလား– လို့ မေးရပါဦးမယ်။
(၂) ဒါကို အကြောင်းပြပြီး ဟုတ်မဟုတ် မသိ တစ်ခြားသော အပြစ်မယ့် ဘာသာရေးဝန်ဆောင်များကို မြို့လယ် မှာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်လိုက်ပြန်တာလည်း မျိုးချစ်ဗုဒ္ဓဘာသာများသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ တစ်မြို့လုံးမှာ ရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးများ၊ မြို့မိမြို့ဖ ဆိုသူများကလည်း ဆင်ခြင်ဉာဏ်အတုံးလိုက် အခဲလိုက်နဲ့ ဆင်ခြင် ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ "မသင့်တော်တာတွေ မလုပ်ကြနဲ့"လို့ မေတ္တာရပ်ခံခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်း မရှိခဲ့တာဟာလည်း သူတို့ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ပညာတတ်မှုကို ဆက်လက်ဖေါ်ပြနေတယ်လို့ ဆင်ခြင်ရပါ့မလား။- ဒီအမှုကို ဖေါ်ထုတ်ဘို့ ကော်မရှင်ဆိုတာ ဖွဲ့ပြီး သမ္မတကြီးဆီကို တင်ပြရမယ်လို့ ကမ္ဘာသိ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး အဖြေက တစ်မြို့လုံး ဘယ်သူမှ တိတိကျကျ မသိပါဘူးတဲ့- ဒီအချက်အလက်ကို တင်ပြသူများနဲ့ လက်ခံပြီး ယုံကြည်တဲ့ သမ္မတကြီး ကိုယ်တိုင်က (ကတော့ပါရဲ့) တစ်ကယ် ပညာတတ်တယ်လို့ မိမိကိုယ်မိမိ ခံစားနေပါသလား။
(၃) သို့မဟုတ် ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်း ရခိုင်သမိုင်းများနဲ့ လက်ရှိ ဖြစ်စဉ်များမှာ ရခိုင်အမျိုးသားရေး ၀ါဒီတို့ရဲ့ လေသံ အတိုင်း တစ်လုံး မကျန် လိုက်ပြောနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး သမားဆိုသူများအနေနဲ့- ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်အား ပညာနည်းပါးနေလို့- ရခိုင်အမျိုးသားရေးဝါဒီများကို ဆရာတင်နေရခြင်းများ ဖြစ်ပါသလား။
ဒါတွေတစ်ခုမှ မဟုတ်ရင်– မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်သူတွေက ပညာတတ်ပြီး ဆင်ခြင်နိုင်အား ကောင်းနေပြီး ဘယ်သူတွေက ပညာမဲ့လျှက် ထင်ရာလျှောက်ပြော၊ ထင်ရာလျှောက်လုပ် ပြုမူနေပါသလဲ– ဆိုတာများရော သုံးသပ်မိပါသလား။ ဆိုတာများကို အရင်အဦး ဆင်ခြင်စေလိုတယ်။
နောက်တစ်ခုက– ရိုဟင်ဂျာများရဲ့ ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းများကို သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ပြန်ပြင်သင့်တယ် ဆို တာကို လက်ခံနိုင်ပါတယ်–၊ အလားတူ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများရဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ပေါ် လစီချ သွန်သင်မှုများကိုလည်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးသင့်တယ် ဆိုတာကိုလည်း ပညာတတ် ဆိုသူများဘက်က စဉ်းစားပေးဘို့ မေ့မနေသင့်ပါ။
ပိုဆိုးတာက- ဘာသာရေးကျောင်းများကိုတော့ ဘာသာရေးပညာသင်လို့ အယူသည်းနေတာလို့ ဆိုလိုနေရင်- မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာကျောင်း မဟုတ်တဲ့ ကျောင်း တစ်ကျောင်းလောက် ပြပေးပါလို့ တောင်းဆိုရတော့မလိုပါ။ လက်ရှိ အစိုးရကျောင်း ဆိုတာများက ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်လက်ထက်ကစ- ဘာသာကျောင်းများ အဖြစ် အသွင် ပြောင်းပေးပြီး ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ စာသင်ကျောင်းမှာ ဘုရားစင်ကြီး ဟီးနေအောင် ထားတာတို့၊ ဘုရားစာ မဖတ်မနေ ရ ပြဌာန်းထားတာတို့၊ လက်အုပ်ချီနှတ်ဆက်တဲ့ ဓလေ့ဖြစ်အောင် ရိုက်သွင်းနေတာတို့-က အစ၊ ပြဌာန်းချက် အားလုံးမှာလည်း ဘာသာရေး ဒဏ္ဍာရီများသာ နေရာယူထားခဲ့ပါပြီ။
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပညာသင်ကြားမှုမှာ "သြကာသ၊ သြကာသ" ရွတ်ရတာ- အပြစ်ဆိုဘွယ် မရှိပါ။ သူ့ဘာ သာ သူ့ဓလေ့နဲ့ သူကိုယ်ပိုင် ထူထောင်ထားတဲ့ ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တက်ချင်သူက တက်နိုင်တယ်၊ မတက်ချင် သူက မတက်ဘဲ နေနိုင်တယ်။ အလားတူ ခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းမှာ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးစာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု များကို ထည့်သွင်းသင်ကြားတာ အပြစ်မရှိပါ။ မွတ်စလင် စာသင်ကျောင်းများမှာလည်း ဒီအခွင့်အရေး ရှိပါ တယ်။
ဒါပေမယ့်- အစိုးရက လူအားလုံး၊ ဘာသာအားလုံး အတွက် ဖွင့်လှစ်ပေးထားတဲ့ စာသင်ကျောင်းများမှာ "သြ ကာသ၊ သြကာသ" ဖတ်နေရမယ် ဆိုရင်- ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်သူများကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြီးမားတဲ့ နှိပ် ကွပ်မှုသာ ဖြစ်ပါတယ်။– ဒါကိုလည်း အစိုးရ အာဏာပိုင်များက လုံးဝ ရပ်တန့်ပေးရပါမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူများ စု နေထိုင်ရာ နိုင်ငံ ဖြစ်လို့ ပြဌာန်းချက်တစ်ခု အဖြစ် ထည့်သွင်း သင်ကြားလိုရင်လည်း သီးခြား ဘာသာ Subject အဖြစ် ပြဌာန်းနိုင်ပါတယ်။–
အခုတော့– ရိုဟင်ဂျာများကို ပညာသင်ပေးမယ် ဆိုတာ "သြကာသ- ကျောင်းတွေ ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင်၊ အဲ့ဒီ ကျောင်းမျိုး ရိုဟင်ဂျာ များနေထိုင်ရာမှာ ဖွင့်သည် ဖြစ်စေ၊ ခရစ်ယာန်များ နေထိုင်ရာမှာ ဖွင့်သည် ဖြစ်စေ၊ ကျောင်းသာ ဆွေးသွားပါမယ်၊ ကျောင်းဆရာလခ ထောက်ပံ့ရင်း အစိုးရမှာသာ ဘတ်ဂျက်ငွေ ကုန်သွားပါမယ်- ကျောင်းတက်မယ့် ကျောင်းသား ရလာမှာ မဟုတ်ပါ။– တစ်ကယ်လို့ ဆယ်စုံပေါက်ကြား တစ်ယောက်တစ်လေ ကျောင်းလာတက်ခဲ့ရင်လည်း– အဲ့ဒီကျောင်းက တတ်မြောက်လာတဲ့ ပညာများက-၊ အထက်မှာ ဖေါ်ပြတဲ့ မျိုးချစ်မျက်ကန်းများကို မျက်မှန်ထူထူ ထပ်ဆင့်တပ်ပေးလိုက်တဲ့ ပညာရှင်များသာ ဖြစ်လာပါတော့မယ်။—
Posted: 23 Aug 2012 02:55 AM PDT
I am sharing this selection of jokes for laughs with no intention to offend anyone. Haveapleasant evening.
Saint Peter asks him, "What have you done to merit entrance into Heaven?"
Gabriel gave the Lawyerasidelong glance, then said to Saint Peter, "Let's give him back his 50 cents and tell him to go to He**."
The first nun replied that she would handle that withoutaproblem. She just picked upasix-pack and took it to the cashier.
A Buddhist Monk was driving in India when suddenlyadog crosses the road.
The car hit and killed the dog.
The Buddhist Monk looked around and seeingatemple, went to knock on the door.
A monk opened the door.
The first monk said: "I'm terribly sorry, but my karma ran over your dogma."
A Catholic Priest dies and is waiting in line at the Pearly Gates.
The guy replies, "I'm Alex Jones,aretired American Airlines Pilot from Dallas, Texas."
He smiles and says to the pilot, "Take this silken robe and golden staff and enter the Kingdom."
Next it's the priest's turn.
He stands erect and booms out, "I am Father Joe McTiernan, pastor of Saint Mary's in Pasadena for the last 43 years."
Saint Peter again consults his list.
"Up here we go by results," says Saint Peter, "when you preached - - people slept; when he flew - - people prayed."
One day, whileawoodcutter was cuttingabranch ofatree above river, his axe fell into the river.
The Lord went down in the water and reappeared withagolden axe. "Is this your axe?" the Lord asked.
The Lord again went down and came up withasilver axe. "Is this your axe?"the Lord asked.
The woodcutter fell to his knees and cried, "Oh, forgive me, Lord. It isamisunderstanding. You see, if I had said 'no' to Jennifer Lopez, you would have come up with Catherine Zeta-Jones. Then if I also said 'no' to her, you would have come up with my wife. Had I then said 'yes,' you would have given me all three. Lord, I amapoor man, and am not able to take care of all three wives, and I love my wife such that I don't want her to share me with anyone, so THAT'S why I said yes to Jennifer Lopez."
The moral of this story is: Wheneveraman lies, it is foragood and honorable reason, and for the benefit of others.. MOSTLY his 1st lady!
Posted: 23 Aug 2012 05:05 AM PDT
Baagaimana UMNO berbicara dengan kelompok komuniti yang berbeza untuk memburukkan PAS.
Posted: 23 Aug 2012 01:36 AM PDT
There are more than 600,000 eligible voters who have not registered in Selangor, and about 3.3 million unregistered eligible voters nationwide.General Election 13 is just around the corner! Have you registered to vote?In order to vote if the coming election is held in 2013, you must register asavoter before 15 September.There will bealarge scale voter registration campaign at nationwide this
Posted: 23 Aug 2012 12:16 AM PDT
A C section is performed by usingaregional anesthetic, which will numb the lower part of your body, allowing you to be awake during the operation. The reason for this is that both you and your baby are much safer than whenageneral anesthetic is used. The anesthetic is injected in to your spine, which is called an epidural and at the same time you may be given the choice of havingapain
Any fitness trainer will tell you that choosing the right dumbbells for home-training is essential for creatingasuccessful and regular workout routine. Many newcomers to the world of strength-training cringe at the thought of having to purchaseawall-sized rack of weights to accompany the changes in their strength abilities over time. Powerblock dumbbells are one of the most popular,
Unless you've spent the last ten years or so living underarock, there'sareally good chance you're aware of at least some of the 'super hero' movies that have been released. The movies keep coming out so they must be popular. In fact, there have been so many that they're going to run out of super heroes soon. One thing that nearly all super heroes have in common isakiller, buff